अदभुत क्षमतासहित सामसङ ग्यालेक्सी नोट नाइन आज सार्वजनिक हुँदै, कति पर्छ मूल्य ? – Etajakhabar
अदभुत क्षमतासहित सामसङ ग्यालेक्सी नोट नाइन आज सार्वजनिक हुँदै, कति पर्छ मूल्य ?
दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङले आज आफ्नो नयाँ फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन ग्यालेक्सी नोट नाइन सार्वजनिक गर्दैछ । फोन लञ्च हुनु अघि नै नयाँ फोनका केही लिक भएका छन् ।
जसअनुसार उक्त फोनमा पाँच सय १५ जीबीको स्टोरेज हुनेछ जुन अहिलेसम्म कुनै पनि फोनमा उपलब्ध छैन । यसका साथै फोनमा द्धण्ण्ण् mब्ज को पावर ब्याट्रि पनि दिइएको छ ।
यसका साथै ग्यालेक्सी नोट नाइनसँगै फिचर भएको फोन एस–पेन पनि दिइएको छ जुन ब्लूटुथ कनेक्टिभिटी र रिमोट कन्ट्रोल फंक्शनसहित आउनेछ ।
रिपोर्ट अनुसार यो फोनको एक सय २८ जीबी र पाँच सय १२ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्ट रुसमा उपलब्ध छ । यो फोनले पाँच सय १२ जीबीसम्मको माइक्रो एसडीसम्मको कार्ड पनि सपोर्ट गर्ने बताइएको छ । जसअनुसार फोनको स्टोरेज १ टीबीसम्म बढाउन सकिन्छ ।
यस्ता छन् सम्भावित विशेषताः
सामसङको नयाँ फोनमा ६.४ इन्च त्तज्म्ंकब्ःइीभ्म् डिस्प्ले, स्न्यापड्रेगन आठ सय ४५ एसओसी प्रोसेसर, ६ जीबी र्याम र एक सय २८ जीबी÷पाँच सय १२ जीबी स्टोरेव हुनसक्छ । यसमा आठ मेगापिस्केसलको फ्रन्ट क्यामरा र १२+१२ मेगापिक्सलको रियर क्यामरा हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विन फ्युचरको एक रिपोर्ट अनुसार एक सय २८ जीबी फोनको सुरुवाती मूल्य नौ सय ३५ पाउन्ड अर्थात् लगभग एक लाख ३३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै गरी पाँच सय १२ जीबी मोडलको एक हजार एक सय १५ पाउन्ड अर्थात् एक लाख ५८ हजार नेपाली रुपैयाँ अनुमान गरेको छ ।
यद्यपी, लिक भएको नयाँ जानकारी अनुसार यो फोन त्यति महँगो हुँदैन । उक्त जानकारी अनुसार एक सय २८ जीबी नोट नाइनको मूल्य आठ सय ९९ पाउन्ड अर्थात् एक लाख २७ हजार रुपैयाँ बताइएको छ भने पाँच सय १२ जीबी मोडलको एक हजार ९९ पाउन्ड अर्थात् एक लाख ५६ हजार मूल्य रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २४, २०७५ समय: १३:१३:४५
अब काठमाडाैंमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड, यस्ताे हुन्छ यात्रु स्मार्ट कार्ड ?
अद्भुत क्षमता भएका दिपेन्द्रले बनाए शरिरबाटै बिजुली उत्पादन हुने मेशिन [भिडियोसहित]
यामाहा आर १५ र आरएक्स १०० मिलाउदा यस्तो बन्यो नयाँ बाइक
नेपालमै पहिलो पटक भित्रियो सिड एटीएम , अब बीउबिजन एटीएम बाटै निकाल्न सकिने
नेपालमै यस्तो घर बनाउने कोरियन कम्पनि जसले १२ लाखमै बनाइदिन्छ यस्तो चार कोठे आकर्षक घर
घोडाघोडी अस्पतालमा डिजिटल रेडियोग्राफी भित्रियो : स्वास्थ्य सेवा परिचयपत्र समेत वितरण
कोरियन कम्पनीले नेपालमै चारपांग्रे सवारी साधन बनाउने , कारहरुको मूल्य ह्वातै घट्न सक्ने
वल्र्डलिङ्कले १०००० स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने